Ibekwe ngaphakathi iindonga uhlanga ehlabathini luncinane, esikaPhapha, St Peter xa Basilica ngokungathandabuzekiyo enye uqulukubhode ezinkulu impucuko ngayo ngezakhiwo kunye nobugcisa. ngoku umtsalane enkulu umzobo 10 iindwendwe million ngonyaka, le sakhiwo mihle engama St Peter xa Square kwaye inama i opulent indibanisela art wembali, ngokweekholamu ezimbejembeje i udaka mosaic engasemlanjeni lenkundla yenzelwe yi uMichelangelo (apho ekhwela encotsheni, Kufuneka ube nesibindi uthathe kwi 491 amanyathelo endleleni!).
Ifunyanwa phakathi kwisixeko transcontinental Turkey kaThixo, Istanbul, Sultan Ahmed Mosque ngokuqhelekileyo obizwa ngokuba The Blue Mosque ngenxa nezibilini zayo unique blue. Ezakhiwe Ottoman Sultan Ahmed I phakathi 1609 yaye 1616, le isakhiwo ithabathekisayo izenzo labenza Umtsalane woKhanketho enkulu kunye kwindawo esebenzayo yonqulo, okuthetha mosque ivaliwe kwi non-abanquli ngexesha imithandazo ezintlanu ngosuku – amaxesha ethandaza kungaba ungene apha phambi kokuba uye.
Kukho i engqongqo isinxibo ikhowudi ukuba zonke iindwendwe kufuneka ithobele phambi kokuba bangene mosque. Okokuqala, izihlangu kufuneka isuswe kwaye mazifakwe kwisingxobo ecacileyo yeplastiki ebonelelwe lokukhonzela simahla – wena ke ube ukhetho ushiye iimbadada zakho emngxunyeni cubby okanye ukuthwala isikhwama nawe. Xa kuziwa impahla yakho, amadoda opt impahla loose nokuqinisekisa imilenze zabo lwazigubungela ulwandle, izinto uphambuke ezintethweni ezifana nempahla yokuthintela kunye ibhulukhwe. Abasetyhini kufuneka sinxibe eziza iimpahla, lo gama kuqinisekiswa iingalo zabo, imilenze, neenwele ziyafundiswa kuzo zonke iingongoma. Oku kuthetha ukuba abasetyhini kulindeleke ukuba banxibe headscarf xa ngaphakathi, njengoko oku kube ingqiqo entsha iindwendwe ezininzi non-Muslim Western, sincoma ukufunda indlela ukunxiba kakuhle oku kubalulekile iimpahla ezindilisekileyo ngaphambi kokuba bahambe.
Vula ukuba icawa kunye neendwendwe ukususela ngenkulungwane ye-19, I Sagrada Familia Basilica wena Ufumana 4.5 abatyeleli million kunyaka ngamnye kwaye ngoku isebenza inkqubo yokungena ticketed ngenxa – ezi ziyafumaneka ukuthenga online ukuya kutsho kwiinyanga ezimbini ngaphambi komhla yotyelelo lwakho. Ezi amatikiti asebenza amaxesha yokungena olungatshintshiyo njengendlela yokunciphisa ingxinano, kunjalo, xa wena ngaphakathi kwenu sikhululekile ukuchitha nje ndingathanda ancome elingaphakathi obanelisayo. Sincoma evumela ubuncinane 2 iiyure ukuthatha kakuhle kule nto bokwakha. Ukuze iindwendwe abafuna ukuya enkonzweni, mass lubanjwe 9am zonke iiCawa 8 ebusuku njalo ngoMgqibelo, njalo 1 iyure kwaye olwenziwa ngeelwimi ezininzi.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “3 Ekufuneka-Bona Iindawo Europe yonqulo” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
I am a content creator and a proud Islamic woman for my free time I write content and my job is to make abayas, hijabs and a range of modest Islamic clothing for women. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam